Indlu esemaphandleni eCoastal Con amara - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni eCoastal Con amara
Indlu esemaphandleni, oziphekelayo kuyo, igumbi lokulala eliyi-1 elinendawo yokulala elala abantu ababini, indlu esemaphandleni esecaleni etshintshwe yabekwa kwitye elidala iCro na mbeithioch (iBarn). Beka iigadi ezonwabisayo ecaleni kwendlu esemaphandleni, kufutshane nolwandle olukhuselekileyo olunentlabathi.
Indlu esemaphandleni oziphekelayo, ejongwe njengendlu esemaphandleni eyakhiwe ngamatye amadala iCro na mbeithioch (iBarn).
Ilungele abantu abayi-2
Isixhobo sokufudumeza esisembindini esineoyile.
Kumgangatho osezantsi: Ikhitshi/indawo yokutyela, igumbi lokulala elilala abantu ababini, ishawa/igumbi langasese.
Izitepsi zomoya ukuya kwigumbi eliphakamileyo, igumbi lokuhlala elijongene nolwandle.
Ikhitshi elineoveni, i-hob, i-microwave, ifriji, i-toaster, iketile yombane, zonke iimbiza, iipani nezinto zokupheka, kuquka ukupheka
izinto ezibalulekileyo - ityuwa, ipepa, ioyile, iti nekofu, iswekile.
Indlu yethu esecaleni kwayo yindawo yangaphambi kokufika kuka-C 1800
indlu esemaphandleni enezinto ezininzi zokuqala.
4.97 · Izimvo eziyi-211
Singama-20km entshona yesixeko i-Galway
kwi-R336 Indlela yonxweme lwaseConamara, kwindawo yaseGaeltacht (ukuthetha isiIrish) yaseSouth Conamara.
Sikwindawo entle ekhokelela kwivenkile enamatye/enesanti (imizuzu eyi-10 xa uhamba) elungele ukuqubha nokubhukuda kwindawo entle yaseGalway Bay, eBurren and Cliffs of Moher neziqithi zeAran. Kukho ikoloni engaselunxwemeni.
KuMntla weR336 kukho indawo enkulu ye-bogland, kunye ne-Galway Bay. I-Turf isanqunyanyisiwe kule bog kwaye iindledlana ze-bog zenza kube mnandi ukuhambahamba.
Isikhululo Sokuzalisa/ivenkile ekumgama weekhilomitha eziyi-1
Isuphamakethe: kukho ivenkile enkulu entle ekumgama weekhilomitha eziyi-2 kunye neofisi yeposi kunye
neepetroli iiPubs njl njl
Kukho iibhari eziyi-2 kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo.
Kwi-Spiddal 8km kukho iibhari eziyi-4 (eziyi-2 ezinika ukutya) iivenkile eziyi-2 zokutya okukhawulezayo, ivenkile yokutya okunempilo, indawo yokutyela isidlo sasemini kunye nelali yobugcisa.
I-ATM kwivenkile enkulu yasekuhlaleni
I am married to Mary, I am a retired surveyor, a keen sailor and vegetable gardener. Mary, also a keen gardener is a retired professional chef and a great provider of scones and jams made from our own home grown fruit
Uza kube ukhona ukuze udibane uze ubulise uze ucebise ngezinto ezinokusetyenziswa zasekuhlaleni phezu kwekofu kwigadi yeentyantyambo.